Isku Diyaari Guurka. | Arimaha Bulshada
Isku Diyaari Guurka.
May 21, 2008 at 10:44 am | Posted in Uncategorized | 3 Comments
ilaah subxaanahu watacaalaa wuxuu banii aadamka ka abuuray lab iyo dhadig sida aanu ognahay wuxuuna dhex dhigay damac ay isku qabaan iskuna xushaan, waana mid muhiim ah oo u horseedeysa in ay unkaan mustaqbal iyo guri lagu dhisay ilaah dartiis .
ilaah subxaanahu wa tacaalaa wuxuu qur,aankiisa noogu sheegay in uu jacayl iyo naxariis dhex dhigay labada ruux ee is qaba, mararka qaar dadka waxay is weydiiyaan sababta ay ku dhacady in qoys dhan oo dhisnaa uu burburo, markaad si u eegto waa arrin dhici karta si kastaba haku noqotee dhinaca kalana inkasta oo uu calafku iska jiro meelna ka bilowdo meelna ku egyahay hadana guri sida lagu dhiso wey adagtahay laakiin si loo burburiyo way fududahay.
Unkidda qoyska ayaa waxay u baahan tahay ka baaraan degid dheer iyo u soo marid wadooyin dhaadheer oo aad ku soo xeyn daabeyso wax walba oo dhibaato iyo kala tag ku abuuri kara qoyska
Xilligan waxaynu joognaa run ahaantii xilli ilbaxnimo ah oo aan sinaba loola mid dhigi Karin xiligii hore oo hablaha iyagoo 12 jir ah lagu dari jiray oday lixdan jir ah oo aysan aqoon xoolan looga qaatay.
Xitaa xiligaas gabadha 12_jirka ah caruur bey ahayd mana lahayn ilbaxnimada iyo wax garashada ay dhinaca guurka ka leeyihiin gabdhaha da,dooda ah ee haatan jooga , hablihii hore waxay iska ahaayeen kuwo iska reer miyi ah oo aan go,aanka reerkooda maahee mid u gooni ah qaadan jirin taasna waxay u sababi jirtay in halka waalidka ay u qorsheeyaan ay un iska raacaan.
Waalidiintii hore ma aysan tixgelin jirin dooqa iyo rabitaanka caruurtooda, mana caado u lahayn in gabar qaan gaar ah ay guriga u joogto oo Markey gabadha gashaanti noqotaba horay baa loogu guurin jiray.
Labada waalid ee wiilka iyo gabadha ayaa un mar mar isku doona labada qof taasoo is fahan darro u keenaya qoyskii cusbaa ee hadda la unkay natiijadiisuna noqoto eber.
Marka waalidiintu isku doonaan labada caruur leysna siiyo, waxaa dhacda in iyagoo aan waxba ka ogeyn la qaban qaabiyo aroos arrintana loo sheego habeenka guri geynta oo keliya.
Waa marka ay labadaba da, yar yihiine, waxay galaan guri mugdi ah, cabsi badan oo aan midkoodna niyad fiican u lahayn,wiilkii baa mararka qaar isku daya gabadhii oo cabsi saa,id ah ku jirta oo difaac nafsiyadeed gashay in uu xoog wax uga dhaadhiciyo taasoo gabadhana ayba qalad u aragto in ninkeeda cusub ee micnaha guriga loogu geeyay aysan aqoon uu gareyskeeda far saaro taasna is faham waa ayay ka dhex dhalisaa labadooda.
Ma jirin in gabadha caynkaas ah ay horay hooyadeed waanooyin iyo talooyin cusub ka siisay gurigeeda cusub waa un waqtiga haku baro.
Marka lag soo tago labda qof ee iyagoo da, yar ay waalidiinta un isa siiyeen, aanu u imaanno gabadha lagu daray 60 jir xoolo laga qaatay, kaas baa gaabdha ugu sii cabsi badan inta badanna wey ka carartaa oo gees xir noqotaa.
Raggii hore haweenka umay turi jirin oo wey garaaci jireen qaar baana nafta kaga qaadi jiray, intaas oo dhanna dhaqamo kala duwan ayay ahayd oo guurku uu lahaa .
waxaa Guurku uu soo maray marxalado kala duwan oo bulsho weynta soomaalida ay qolaba si u qabanqaabiso.
waxaa jirta in marka ninku gabadha la siiyo , uu geysto meel banaan ah, waa leysku soo baxayaa gabadhii buu geed ku xirxirayaa ka dibna wuu garaacayaa taasoo micnaheedu yahay in isaga la siiyay ayna u sugyeso in uu guri geysto oo keliya.
hebel heblaayo ayuu garaacday baa la leeyahay markaas.
Waxaa jirtay oo caadooyinka soomaalida ka mid ahaa in caruurta isla dhashay sida ilmo adeerrada iyo ilmo abtiyaasha la isku guuryo taasoo ay ugu xilanayeen waalidiinta arrimo dhowr ah oo iyaga u khaas ahaa.
Tusaale ahaan in xidid iyo walaaltinimo la isku darsado iyo in gabadha ay wiil walaalkeed ah u guri gasho laakiin taas aanu eegno xitaa iyada dhibka ay lahayd oo ilaa iyo haatan ay soomaalida badankeed ku dhaqanto.
Waa mida koowaade, horay soomaali u tiri (ilko iyo carab baa isugu dhow weyna is qoomaan)
Maahmaahdaasi qiimaha badan iyo mid kaloo oraneysa dad is jecel wax isugu dar iyagaa is nacayee ayaa horta soo ifbaxaysa , waxaa isku xumaanaya waalid, waxaa isku xumaanaya walaalo hadaaye isku dugaashanayay, dhibaatooyin intaa ka badan ayaana ka soo ifbaxaya.
Si kastaba guurkii hore iyo dhaqamadii soomaalida ay lahayd kuma uusan dhisneyn dooqa labada is guursanaya , nolol dhadhan lehna halkaasi ma oolin balse haatan waxynu joognaa
xilli qof walbaba uu wax ka fahmay nolosha qiimaheedana yaqaanno.
Waxaa badanaa nasiib loo yeeshaa in la hanto qof aad ku qanacsantahay oo cidina kugu qasbin laakiin halkii loo baahnaa guurkaas isaga xitaa ma maraa?
Haa wa la oran karaa haduu jiro guur si wanaagsan ku dhisma oo qoysku wanaag, naxariis iyo jacayl ku dhisan yahayna waa sidii la raby.
Laakiin hadiiba uu jiro guur markiisii hore jacyl lagu soo dhisay dib dambana ka burburay waxaa guurkaasi uu ka xumaaday aasaaska hore wax bilow ka xumaadana lagama rajeynayo dib in ay ka wanaagsanaadaan.
Waa mida koowaade, waxaa la isku soo guursady jacyl ku soo booddo iyo xiiso aan melba gaarsiisneyn ku dhisnaa , gurigii baa la yimid oo qoys baa la unkay, waxaa la gaaray hadafkii la lahaa hamuuntii iyo xiisihii baa dhamaaday maxaa isku soo haraya?
Wejiyo aan is rabin kala xiiso dhacy iskuna dhib qaba, waxaa imaaneysa markuu ninku shaqada ado xaaska in ay leyr qabow soo marto iga bax kan baanba nacaye, iyo ninkii oo buuqa xaaskiisa ka aada dibadda saq dhexena inta yimaada ka seexda.
Gurigii jacayl been beenta lagu soo dhisay baa isku badalaya guri nacayb uu hareeyay oo la isku qeyliyo, la isku buuqo naxariistuna ka fogtahay ka dibna horseeda furiin.
Markii hore wanaagsanaan lahaydaa in laga fiirsado intaan la falin, loo deymo qabi lahaayaa in guurku yahay wax culus mas,uuliaydna ay ku fuuleyso loona baahan yahay in aad ka soo baxdo taas ma aysan dhicin ee balaayaa ka adeegtay gurigii.
Dhalinta hadda soo kacaysa ee guurdoonka ah bal u fiirsada guurka, raadsada qof macquul ah oo idinla fahma mas,uuliyadda guurka, guursada qof aad u heysaan jacyl aan dhamaaneyn weligiis markaas waxaad awoodaan in aad ugu dul qaadataan qaladaadka yar yar ee ka dhaca.
Gurigaad dhiseysaan isu diyaariya kana dhiga mid qurux badan oo ay ka guuxayaan mowjado cishqi iyo kalgacayl, haka dhigina mid la isku kiraaheysto taasna ma aha hadfka qof walba uu uga soo tegay gurigii uu ku soo barbaaray.
Wiilku ha noqdo mid xaaskiisa dhan walba ka raalli geliya u muujiya dabacsanaan, naxariis iyo tixgelin dheeraad ah, ha u noqdo mid daacad ah una sheegta hadba xaaladiisa halka ay mareyso.
Gabadha ha u noqoto seygeeda hooyadiis oo kale, sababtoo ah ninku markuu ka soo tago hooyadiis wuxuu tabayaa hagar la,aanta ay wax ugu qaban jirtay, jacaylkii iyo naxariistii ay u heyn jirtay, hiilkii ay ula dul taagneyd laakiin hadii loogu badalo qeylo joogto ah aad buu isu ciilayaa ugana qoomameynayaa, gabdhow garta mas,uuliyadda idinka saaran seygiinna , soo dhoweysta qaraabadiisa, saxiibadiisa iyo intuu jecelyahayba una xaqdhowra si saa,id ah kana amar qaata.
Waxaa wanaagsan in labada dhinac ay sidaa ku dhaqmaan una arkaan guurka in uu yahay shey qaali ah oo wanaagsan laguna gaaro hadafka nolosha.
Waxaan ku soo koobayaa maqaalkeygan walaalahay muslimiinta ahow aan ku dhaqanno wixii nala faray ee wanaag ah aana noqonno dad daacad ah oo ilaah dartiis wax isugu sheega.
Faadumo Macallin Abuukar(faadumoruush)
As/c dhaaman dadka muslimintahauw waadkumahadsantin maaqalka waanagsan ee usoojeedisen dhaalinyaradaa somaliyd
Comment by mushtaq cali Cismaan— March 20, 2011 #
waana inay ku dhaqman waanadada Adaadusojeedisen maahadsanid
Waan xiseeyay maqalkan an akhriiyay wiixii taalaloiyo tuusalaaha
igaala sooxidhidh Emalika ikran_10@hotmail.co.uk ama